Ọrụ Metal zọ - Anebon Metal Products Co., Ltd.
Anebon ahaziri metal zọ na-agụnye punching, ekwe, ndinyanade mbịne, embossing na ndị ọzọ na arụmọrụ. A na-arụ ọrụ ọ bụla site na iji ngwaọrụ CAD / CAM emepụtara nke nwere ike inye nkenke chọrọ maka akụkụ dị mgbagwoju anya. Mpempe akwụkwọ metal stamping bụ a ngwa ngwa na irè usoro na-emepụta inogide, elu-edu akụkụ maka ngwaike, aerospace, ọgwụ, electronic, ulo oru, ọkụ na ndị ọzọ ọrụ. Anyị ga-eji akụrụngwa anyị dị elu na otu ndị nwere ọfụma iji hazie ngwaahịa ị chere, ma anyị kwenyere na anyị nwere ike izute mkpa gị ma ọnụahịa na mma.
Anyị nwere ike ịnye nhọrọ nrụpụta ndị a:
Ihe omimi miri emi
Ngwá ọrụ Ndinam
Mgbapu, na-akụ na ream
Abụ na ntule
CO2 ịgbado ọkụ - akwụkwọ ntuziaka na robotic
Usoro Metal Stamping
Ọ bụ ezie na enwere ike gbanwee ya iji rụpụta akụkụ ụfọdụ, stampụ igwe anyị na-esikarị otu usoro ise ahụ:
Nyocha nyocha:Ndị injinia anyị ga-enyocha akụkụ akụkụ ahụ n'ụzọ zuru ezu iji hụ na ọ dabara maka stampụ igwe. Nke a na-agụnye nyocha miri emi nke akụkụ akụkụ, ihe, gbatịkwuo oke na nnabata chọrọ.
Nhọrọ Nhọrọ: Ndị injinia anyị ga-ekpebi igwe kachasị dị mma na dayameta maka akụkụ akụkụ na akụrụngwa.
3D Virtual Sample:eji mebere software ike prototypes nke akụkụ. Tupu usoro mmepụta amalite, a na-agbaso ihe ngosi ahụ site n'ọtụtụ imepụta arụmọrụ iji chọta nsogbu ọ bụla.
Mbido akụrụngwa: Ndị ọrụ anyị nwere nkà na-enyocha nha na ihe ndị a chọrọ nke ihe ndị mejupụtara ma melite ngwá ọrụ.
Usoro:Tinye mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ma ọ bụ oghere ọla na ebu ma dozie ya. Mgbe ahụ rụọ ọrụ igwe akụrụngwa wee bido ịrụ ọrụ site na ike sutable. Tinyegharịa usoro ahụ ruo mgbe akụrụngwa ruru ogo na ọdịdị chọrọ.
Nhazi na imepụta nke agam n’ihu na nkenke bu akuku nke nkwa inyeputa nghaputa nke oma maka imeputa ihe ndi mejuputara.
Taa, anyị na-eji ahụmịhe nke ụlọ anyị na-enye ọrụ ebu oke dị oke ọnụ.
Anyị nwere ike ịgbanwe imewe ngwaahịa ma ọ bụ CAD injinịa ịbịaru iji mepụta akụrụngwa igwe nke nwere ike ịmepụta ngwaahịa gị. Ebu ebu bu ihe kwesiri ntukwasi obi ma buru ihe kwesiri ntukwasi obi, ya na ogologo ndu ya, ya mere enwere ike iwere ugwo dika ego.
Akụrụngwa ebu ga-abụ nke gị, mana anyị nwere ike ijikwa, mezigharị ma rụkwaa oge achọrọ.
Dị ka a zuru ezu ngwá ọrụ na-anwụ anwụ shop, anyị nwere nkà na niile ebe ofgha tinyere eriri laser, CNC punching, CNC ekwe, CNC akpụ, ịgbado ọkụ, CNC machining, ngwaike ntinye na nzukọ.
Anyị na-anabata akụrụngwa na mpempe akwụkwọ, efere, ogwe ma ọ bụ tubes ma nwee ahụmahụ na-arụ ọrụ na ọtụtụ ihe dịka aluminom, ọla kọpa, igwe anaghị agba na carbon. Ọrụ ndị ọzọ gụnyere ntinye ngwaike, ịgbado ọkụ, egweri, ịkpụzi, ịtụgharị na nzukọ. Dị ka mpịakọta gị na-abawanye, anyị nwekwara nhọrọ nke iji ngwá ọrụ siri ike rụọ akụkụ gị iji na-agba ọsọ na ngalaba ngalaba igwe anyị. Nhọrọ nyocha sitere na njirimara dị mfe na-enyocha ụzọ niile site na FAIR & PPAP.